Tags - zimbabwe
10 July 2020 - 01:45
TEHRAN, August 12 - Zimbabwe’s police cracked down on the opposition’s anti-government protest in Harare.
News ID: 43147 Publish Date : 2019/08/17
Nine subsistence miners die in Zimbabwe blasts
TEHRAN, May 28 - At least nine miners died in Zimbabwe following blasts in a shaft north of the capital Harare where they were illegally digging for gold, police said Tuesday.
News ID: 40008 Publish Date : 2019/05/28
TEHRAN, May 25 - Zimbabwe's main opposition this weekend is expected to elect Nelson Chamisa as its next president in its first congress since the death of its revered founder, Morgan Tsvangirai.
News ID: 39831 Publish Date : 2019/05/25
TEHRAN, Mar 17 - More than 100 people have died and many more are missing in Mozambique and neighboring Zimbabwe on Sunday after tropical cyclone Idai barreled across the southern African nations with flash floods and ferocious winds.
News ID: 36943 Publish Date : 2019/03/17
At least 24 dead as Cyclone Idai hits eastern Zimbabwe
TEHRAN, Mar 16 - At least 24 people have been killed and dozens are missing as tropical cyclone Idai hit eastern parts of Zimbabwe after lashing neighboring Mozambique, the government said on Saturday.
News ID: 36878 Publish Date : 2019/03/16
TEHRAN, Jan 16 - Leading Zimbabwean activist Evan Mawarire was arrested on Wednesday when he was taken from his house by armed police in a widening crackdown after violent anti-government protests.
News ID: 34174 Publish Date : 2019/01/16
TEHRAN, Jan 15 - Zimbabwe police fired tear gas to disperse protesters in the second city of Bulawayo on Tuesday, a day after the country was rocked by violent demonstrations against a sharp hike in fuel prices.
News ID: 34131 Publish Date : 2019/01/15
TEHRAN, November 16 - Fire swept through a passenger bus in Zimbabwe, and police said Friday that more than 40 people died and at least 20 were injured, some with severe burns.
News ID: 31622 Publish Date : 2018/11/16
At least 47 dead as two buses collide in Zimbabwe
TEHRAN, November 09 - At least 47 people have died in a crash involving two buses near the Rusape tollgate in Zimbabwe, state broadcaster ZBC reported on Wednesday.
News ID: 31283 Publish Date : 2018/11/09
Zimbabwe declares cholera emergency in Harare after death toll rises to 20
TEHRAN, September 12 - Zimbabwe declared a cholera outbreak in the capital Harare after 20 people died from the disease.
News ID: 28707 Publish Date : 2018/09/12
TEHRAN, August 22 -Zimbabwe's Constitutional Court will Wednesday hear an opposition petition seeking to overturn the presidential election result, in a legal challenge seen as unlikely to succeed despite allegations of vote fraud.
News ID: 27771 Publish Date : 2018/08/22
News ID: 27175 Publish Date : 2018/08/09
Rouhani congratulates Mnangagwa over election as Zimbabwe president
TEHRAN, August 8 - Iranian President Hassan Rouhani congratulated Emmerson Mnangagwa over his election as Zimbabwean president.
News ID: 27107 Publish Date : 2018/08/08
TEHRAN, July 30 - Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa cast his vote on Monday in the first election since the removal of Robert Mugabe, rejecting claims made by his former mentor a day earlier that the election would not be free.
News ID: 26690 Publish Date : 2018/07/30
Zimbabwe's tainted election authority under fire again
TEHRAN, July 29 - Nothing would demonstrate that Zimbabwe has entered a new era since Robert Mugabe's ousting more than a clean election.
News ID: 26635 Publish Date : 2018/07/29
TEHRAN, July 25 - The leader of Zimbabwe's biggest opposition party is rejecting the idea of boycotting elections on Monday despite what he calls a biased election commission.
News ID: 26497 Publish Date : 2018/07/25
TEHRAN, July 24 - 5Zimbabwean factory manager Sifelani Jabangwe is a survivor of the Mugabe years, overseeing a company that stayed in business through hyperinflation, the national currency being abandoned and an exodus of investors.
News ID: 26417 Publish Date : 2018/07/24
23 presidential candidates cleared for Zimbabwe's July vote
TEHRAN, June 15 - A record 23 presidential candidates were cleared on Thursday to run in Zimbabwe's elections due on July 30, including incumbent Emmerson Mnangagwa and young opposition leader , the country's electoral commission announced.
News ID: 24406 Publish Date : 2018/06/15
Zimbabwe urges energy cooperation with Iran
TEHRAN, May 11 - Zimbabwean president’s chief advisor Christopher Mutsvangwa called for cooperation and investment of Iranian companies in the fields of energy and information technology.
News ID: 22776 Publish Date : 2018/05/11
Zimbabwe forces say country back to 'normalcy' after crisis
TEHRAN, November 27 - Zimbabwe's security forces on Monday reported incidents of looting and illegal occupation of farms and houses following the resignation last week of former President Robert Mugabe and the inauguration of his successor, Emmerson Mnangagwa.
News ID: 16227 Publish Date : 2017/11/27
Foreign meddling in Libya at unprecedented levels: UN chief
Chancellor Rishi Sunak in desperate bid to kickstart the economy
Disgraced ex-MI6 officer Christopher Steele implicates China in UK espionage
A woman whose home was damaged said her family were lucky to be alive